2018 – Year – Channel Myanmar 7.6
Raid (2018) ဒီဇာတ်ကားလေးဟာ ၁၉၈၀ခုနှစ်များဆီက အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အခွန်ဦးစီးဌာနအရာရှိတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်းရဲသားတွေဆီကခေါင်းပုံဖြတ်၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုတွေနဲ့ချမ်းသာလာပြီး တစ်ဖက်မှာလူအများအမြင်ကြည်အောင်ဘီလူးခေါင်းကွယ်ထားတတ်တဲ့ လူချမ်းသာတွေ၊ ပြည်သူတွေကိုအသုံးချပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကို သူတို့ဆီမှာအမှန်တကယ် တရားဘောင်အတွင်းကနှိပ်ကွပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကိုအခြေတည်ထားတာပါ။ ရိုးသားပြီးကိုယ့်ခံယူချက်အတိုင်းလုံးဝတရားမပျက်တဲ့ အစိုးရအရာရှိတစ်ယောက်သူတို့ဆီမှာရှိဖူးတယ်ဆိုတာကို ရိုက်ကူးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူတရားပျက်ပျက်ကိုယ်မပျက်ဘူးဆိုတဲ့သတ္တိနဲ့ အဆိုပါအခွန်ဦးစီးဌာနကအရာရှိတစ်ယောက် လက်နောင်းမြို့ကို၄၉ကြိမ်မြောက် ရာထူးပြောင်းရွေ့ခြင်းခံရပြီးရောက်လာတာကစတာပါပဲ။ အရင်အရာရှိတွေနဲ့မတူပဲ အလုပ်ကိုအမှန်အကန်လုပ်တဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ ဂုတ်သွေးစုပ်နေတဲ့ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ကြီးတွေ မျက်ဖြူလန်တော့တာပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းလေးကိုဆက်မပြောတော့ဘဲကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်လိုက်စေချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသဘောသဘာဝတွေ၊ ရိုးသားတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေနှိပ်ကွက်ခံရမှုတွေ၊ လူထုကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေဘယ်လို ဦးနှောက်အဆိပ်ခတ်ထားသလဲဆိုတာတွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရိုက်ကူးပြသပုံဖော်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ Rating အနေနဲ့လည်း 7.6 အထိရရှိထားပြီး ငွေကြေးအရလည်းအောင်မြင်ထားတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ် (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ ကိုသူရပါ) File Size : (950 MB) and (394 MB) Quality : WEB-DL 720p Running Time : 2hr 2min Format : Mp4 Genre : Action, Crime, Drama Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source : 1080p.WEB-DL.H264.AAC2.0 DTOne Translated by Thura Zarni Aung Encoded ...
IMDB: 7.6/10 3,795 votes
Sara’s Notebook (2018) Sara’s Notebook ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့ အာဖရိက မှာ ရိုက်ထားတဲ့ စပိန် Adventure/Thriller ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Rating 6.2 ရထားပြီး သည်းထိပ်ရင်ဖိုဖွယ်ကြည့်ရမယ့်ကားလေးပါ။ ဇာတ်လမ်းကတော့ ရှေ့နေတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Laura ဟာ နှစ်နှစ်လောက်ပျောက်သွားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ညီမ Sara ကိစ္စနဲ့ အာဖရိကကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အာဖရိကကိုရောက်လို့ Laura ဟာ သူ့ညီမ Sara ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်ကို တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ပျောက်နေခဲ့တဲ့ သူ့ညီမကို ရှာဖို့ စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ညီမကို သွားရှာရမယ့် နေရာက ကမ္ဘာ့အန္တာရာယ် အများဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ အာဖရိက သူပုန်စစ်တပ်တွေ ပိုင်တဲ့ ရွှေနက်မိုင်းတွင်းတွေတူးတဲ့နေရာကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Laura ကရော ဒီလို ဝေးလံပြီး အန္တာရာယ်များတဲ့ နေရာကို ဘယ်လို စွန့်စားပြီးသွားရမလဲ ဘယ်လို အသက်အန္တာရာယ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမလဲ။ သူ့ညီမ Sara ကရော ဒီလို သူပုန်စစ်တပ်တွေနေတဲ့ နေရာမှာ အသက်ရောရှင်သေးရဲ့လားဆိုတာကို ဇာတ်လမ်းအဆုံးထိ ရင်တစ်မမ နဲ့ ကြည့်ရမယ့်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ (ဘာသာပြန်သူကတော့ Brilliant Star ...
IMDB: 6.2/10 422 votes
Zombies (2018) Zombies(2018) IMDb...6.5 ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ Disneyက 2018မှာ အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ကားလေးပါ ..... ဇွန်ဘီ(zombie)ဇာတ်ကားဆိုပေမယ့် စိုးရိမ်ထိတ်လန့်သွေးပျက်စရာအခန်းတွေနဲ့ကားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး.. ..မတော်တဆမှုတစ်ခုကနေ လူသားမျိုးနွယ်အတော်များများဟာ ဇွန်ဘီတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်.. .အစိုးရကနေ ဇွန်ဘီတွေနဲ့ လူသားစင်စစ်တွေကြားမှာ တံတိုင်းကြီးခတ်လိုက်တယ်...နောက်ပိုင်း တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ဇွန်ဘီတွေဟာ ထိန်းချုပ်စရာ ကိရိယာတွေတီထွင်ပြီး ပုံမှန်လူသားတစ်ဦးလိုနေထိုင်လာကြတယ်.. .ဇွန်ဘီတွေဟာ သာမန်လူတွေလို ပညာတွေသင်ကြတယ်..အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်.. .သီချင်းတွေဆိုကြတယ်.. .သို့ပေမယ့်လည်း ဇွန်ဘီတွေဟာ ပုံမှန်လူသားတွေအတွက် ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စရာအဖြစ်ရှိနေဆဲပါ.. .ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဇွန်ဘီ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို လူသားကောင်မလေးတစ်ယောက်က ကြွေသွားတယ်. . Disneyဇာတ်ကားလေးတွေအတိုင်း ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဇာတ်အိမ်တည်ပြီး သီချင်းလေးတွေ မြိုင်ဆိုင်နဲ့ သက်ဝင်လှုပ်ရှားစွာရိုက်ပြထားပါတယ်... ကိုင်း ဖြေဖျော်ရေးဆန်ဆန် ပျော်ပျော်ပါးပါးကားမျိုးလေးတွေမှ သဘောကျနှစ်ခြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက် အချစ်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးအဖြစ်ညွှန်းဆိုပါရစေ...ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ Inzali Than Htike ဖြစ်ပါတယ်... File Size : (850 MB) and (350 MB) Quality : Blu-Ray 720p Format…mp4 Duration…01:34:00 Genre : Musical, Romance Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Inzali Than Htike Encoded by Phyo Pyae
IMDB: 6.5/10 1423 votes
In Darkness (2018) လျှို့ဝှက်သည်းဖိုမှုခင်းဇာတ်ကားကောင်းများကို ကြိုက်နှစ်သက်တတ်တဲ့ သူတွေအတွက် ယခုလအတွင်းကမှ ထွက်ရှိထားတဲ့ In Darkness ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာ Anthony Byrne ကရိုက်ကူးပြီးတော့၊HBO ရဲ့နာမည်ကျော် TV Series မှာ Margaery Tyrell အဖြစ်လည်းကောင်း၊ The Hunger Game ဇာတ်ကားတွေမှာ Cressida အဖြစ်လည်ကောင်း သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Natalie Dormer ကတော့ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ========== ဆိုဖီယာဟာ မျက်မမြင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပီယာနိုပညာရှင်တစ်ဦးအဖြစ် ဘ၀ကိုရပ်တည်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ လက်ရှိငှားရမ်းနေတဲ့တိုက်ခန်းမှာ ခြောက်လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့သည့်တိုင်အောင်နေထိုင်ခဲ့ပြီးသော်ငြားလည်း မျက်မမြင်တစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် အိမ်နီးချင်းမိတ်ဆွေ များများစားစားမရှိဘဲ သူ့တိုက်ခန်းရဲ့အပေါ်ထပ်မှာနေထိုင်တဲံ ဗရောနစ်အမည်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့သာ ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ရက်မှာ ဗရောနစ်တစ်ယောက် အမျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ စကားများပြဿနာတက်နေတာကိုဆိုဖီယာတစ်ယောက်ကြားကြားပြီးလိုက်ချင်းမှာပဲ ဗရောနစ်ဟာ တိုက်ပေါ်ကပြုတ်ကျလို့သေသွားခဲ့ပါတယ်။ ခဏကြာပြီးနောက် ရဲတွေရောက်လာပြီးဆိုဖီ့ယာကို ဗရောနစ်သေဆုံးမှုနဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းရာမှာတော့ ဆိုဖီယာဟာဘာမှမကြားခဲ့ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ရဲတွေက ထိုအမှုကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်မှုလို့သာ ခေါင်းစဉ်တပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သင်္ကာမကင်းတဲ့ ရဲဘက်က ...
IMDB: 5.8/10 577 votes
Future World (2018) ၂၀၁၈ထဲမှာထွက်တဲ့ကားတွေမှာ အနာဂတ်မှာဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာတွေးတောရိုက်ထားတဲ့ကားတွေအတော်များသားဗျ အခု Future World ဆိုတဲ့ကားကလဲ နာမည်အတိုင်း အနာဂတ်ကမ္ဘာမှာ အခြေတည်ထားပါတယ် လူသားတွေအချင်းချင်းစစ်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ် သေကြေပျက်စီးကုန်ကြတယ် ဘယ်လောက်ထိအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုရင် ပစ်စရာကျည်ဆံတောင်မရှိတဲ့ခေတ်ဖြစ်သွားတယ် အဲ့တော့ စစ်ပွဲကြီးအပြီးကျန်ခဲ့တဲ့လူတွေကရော ဘယ်လိုရှင်သန်နေထိုင်ကြလဲ လောကကြီးရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ကောင်းတာလုပ်တဲ့လူနဲ့ဆိုးတာလုပ်တဲ့လူပဲရှိတာဆိုတော့ သူ့ဘာသူအဖွဲ့လေးတွေနဲ့ဖွဲ့နေကြတယ်ပေါ့ဗျာ ဆိုးတဲ့လူတွေက အဖွဲ့လေးတွေနဲက သူ့တို့သူတို့ စစ်ခေါင်းဆောင်(warlord)လို့ခံယူပြီးသောင်းကျန်းနေကြတယ်ပေါ့ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ဇာတ်လိုက်ကတော့ အိုအေစစ်လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာနေကြတဲ့လူစုထဲက မင်းသားပေါ့ သူ့အမေဖြစ်သူ စစ်ပွဲရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါကိုခံစားနေရသူ သေလုမျောပါးဝေဒနာသည်အဖြစ် တရုတ်မင်းသမီး (Lucy Lui)ကသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် မင်းသားက အမေ့ကိုဆေးကုသဖို့အတွက် နတ်ပြည်ကမ်းခြေ(Paradise Beach)ကိုသွားချင်နေတယ် အဲ့နေရာမှာဆေးရတယ်ကြားထားတာကိုး အဲ့လိုနဲ့ မင်းသားရဲ့ဆေးရှာပုံတော်ခရီးစဉ်စရတော့တာပေါ့ ဇာတ်လိုက်မင်းသမီးကတော့ အက်ရ်ှလို့ခေါ်တဲ့ စက်ရုပ်မလေး သူကဟိုးစစ်ပွဲကြီးကတည်းက ရှိနေခဲ့တာ သူကသတ်ဖြတ်ရတာတွေကိုမုန်းတီးနေတယ် သူကိုယ်တိုင်ဘ၀တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ချင်နေတယ် မင်းသားတစ်ယောက် ဆေးကိုရှာတွေ့သွားမလား သူရှာနေတဲ့ဆေးကရောတကယ်ပဲရှိနေလို့လား စက်ရုပ်မလေးနဲ့ရောဘယ်လိုနှစ်ပါးသွားမလဲဆိုတာတွေကတော့ဇာတ်ကားဒေါင်းကြည့်ကြပါကုန် ဒီကားရဲ့ Cast List ကတော့ အလန်းဗျ ဗီလိန်အဖြစ် နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ James Franco, Resident Evil မင်းသမီး Milla Jovovich တို့ပါဝင်ထားတယ် ပြီးတော့ ထူးခြားချက်အနေနဲ့ Snoop Dogg တောင်ပါလိုက်သေးတယ်ဗျ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ အဖော်အချွတ်အခန်းအချို့နဲ့ စကားလုံးရိုင်းရိုင်းတချို့ပါဝင်နေတာကြောင့် ချင့်ချိန်ပြီးဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ (ဘာသာပြန်သူကတော့ ကိုဟိန်းမင်းထွန်းပါ) File Size ...
IMDB: 3.8/10 123 votes
Every Day (2018) မိုးလင်းတိုင်း ဘဝအသစ်တစ်ခုမှာ လူအသစ်တစ်ယောက်လိုနေ့တိုင်းနိုးထလာရတဲ့ A.... နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘဝအသစ်တစ်ခုမှာရှင်သန်ရင်း သူ့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တည်မှုကိုတောင် မေ့လျော့လုဆဲဆဲအချိန်မှာပဲ သူဝင်ရောက်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင် ဂျပ်စတင် ရဲ့ ချစ်သူ ရီအန်နွန်နဲ့ တွေ့ဆုံလာခဲ့ရတဲ့အခါ... နေ့တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲနေပေမယ့် မပြောင်းလဲတဲ့ သူ့အချစ်စိတ်ကို ရီအန်နွန် သိအောင်ဘယ်လိုထုတ်ပြမလဲ? ရီအန်နွန်ကရောဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှာလဲ? ဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲ? ဆိုတာကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရမယ့် ကားလေးတစ်ကားပါ။ အားမလို အားမရမှုတွေ၊ကြည်နူးမှုတွေ စိတ်ခံစားချက်မျိုးစုံကိုခံစားရင်း အဆုံးထိဆွဲခေါ်ပေးသွားနိုင်တဲ့ကားလေးတစ်ကားဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ ရိုးရိုးဇာတ်အိမ်တွေထဲကဖောက်ထွက်ထားတဲ့ ဒီကားသစ်လေးကတော့ Everyday (2018)ပါ။ Dramanကားကောင်းလေးတွေကြိုက်တဲ့CM ပရိသတ်ကြီးအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့ မအေးမွန်ကျော် ပါ) File Size : (800 MB) and (327 MB) Quality : WEB-DL 720p Running Time : 1hr 37min Format : Mp4 Genre : Drama, Fantasy, Romance Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source : 720p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT Translated by Aye Mon ...
Gringo (2018) Gringo ဆိုတာ စပိန်တွေက ဒါမှမဟုတ် စပိန်စကားပြောနိုင်ငံတွေက အမေရိကန်တွေကိုခေါ်တဲ့အသုံးအနှုန်းလို့ဆိုပါတယ် (ကိုးကား- ဘာဘာညာညာ).. ဒီဇာတ်လမ်းလေးက ရိုးရိုးအအ အမေရိကန်လူမည်းတစ်ယောက်အကြောင်းကို ရိုက်ထားတဲ့ ဒရာမာဇာတ်မြူး မှုခင်းကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်… ဟာရိုးဆိုတဲ့ အမေရိကန်လူမည်းတစ်ယောက်ဟာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သူရဲ့ဆေးကုမ္ပဏီမှာ ရိုးသားကြိုးစားစွာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ပေါ့… သူ့သူငယ်ချင်းကသူ့ကို သူပိုင်တဲ့ဆေးကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်သွင်းပေးထားရုံမက သူ့မိန်းမ အိမ်တွင်းဒီဇိုင်နာကိုလည်း သူ့အိမ်ပြင်ဆင်ဖို့ အလုပ်အပ်ထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်နေသူတစ်ယောက်ပေါ့…. သူတို့ဆေးကုမ္ပဏီက အမှန်တကယ်တော့ ဟန်ပြသက်သက်ပဲဖြစ်ပြီး တကယ်တမ်းမှာ မက္ကဆီကိုက မူးယစ်ရာဇာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး တားမြစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်နေတာပါ… ဒါကို စာရင်းကိစ္စတွေပဲလုပ်ပေးရတဲ့ဟာရိုးကမသိပါဘူး…. ဒီလိုနဲ့ကုမ္ပဏီအရှုံးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ ဟာရိုး ဟာ အလုပ်ပြုတ်မယ့်အရေးတွေးပူနေရာကနေ ကြံရာမရဖြစ်ပြီး…သူ့သူငယ်ချင်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် နောက်ကျောဓားနဲ့ထိုးမယ့်အဖြစ်တွေပါသိပြီးတော့ ပြန်ပေးဆွဲခံရတယ်ဆိုပြီး..လုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် မက္ကဆီကိုမူးယစ်ရာဇာတွေ သူ့ကိုတကယ်ပြန်ပေးဆွဲတဲ့အခါမှာတော့….. ၂၀၁၈ ထွက်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်လေးကို မြူးမြူးလေးရိုက်ပြထားပါတယ် နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို အဆုံးထိဆွဲဆောင်ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီး ၁၈+ဒိုင်ယာလော့တွေပါတယ်ဆိုတာကိုလည်း ပြောပြထားပါရစေ Ratings IMDb – 6, Rotten tomatoes – 41%, Google users – 70% (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ပေးထားသူကတော့ ကိုဇွဲခန့်သွင်ပါ) File ...
Gonjiam: Haunted Asylum (2018) ဒီတစ်ခါတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီနေ့ မှစပြီး ရုံတင်ပြသနေတဲ့ကိုရီးယား Horror ရုပ်ရှင်လေးတစ်ခုကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာ ဂွန်းဂျီယန် စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံရဲ့ လူနာပေါင်း၄၂ ယောက်ဟာ မိမိကိုကိုယ်အဆုံးစီရင်ခဲ့ကြပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဆေးရုံရဲ့ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဟာလည်း ပဟေဠိဆန်ဆန် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ အဆိုပါဆေးရုံကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ် ဒီဖြစ်ရပ်တွေအပြီးမှာတော့ အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေမှတစ်ဆင့်အဲ့ဒီဆေးရုံမှာ သရဲတစ္ဆေတွေမြင်တွေ့ ရတယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟလ ထွက်ပေါ်လာပါတယ် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာနေရာများကို စွန့် စားသွားလာပြီး မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့Horror Times ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ မှ လူငယ်တစ်စုဟာ ကမ္ဘာပေါ်ကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနေရာတွေမှာ နံပါတ်ခုနစ်နေရာမှာရှိနေပြီးကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနေရာတွေထဲမှာတော့နံပါတ်သုံးနေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ အဆိုပါ ဂွန်းဂျီယန် စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကို စွန့် စားခန်းတစ်ရပ်ထွက်ပြီး သူတို့ ရဲ့ စွန့် စားခန်းကို အွန်လိုင်းမှာပါတိုက်ရိုက်လွှင့်တင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ် သူတို့ နဲ့ အတူ စွန့် စားခန်းမှာလိုက်ပါဖို့ အတွက် အခြားလူသစ်တွေကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ် သူတို့ ရဲ့ စွန့် စားခန်းခရီးစဉ်မှာ ဘယ်လိုအတားအဆီးတွေရှိနေမလဲ အဲ့ဒီဆေးရုံဟာ ကောလဟလတွေအတိုင်း တကယ်ပဲသရဲခြောက်နေတာလား ဒါမှမဟုတ် ...
The Hurricane Heist (2018) အခု ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် တလောကမှရုံတင်သွားတဲ့ The Hurricane Heist ဆိုတဲ့ကားလေးကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ဝေနဲ့ ဘရိဇ်တို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်က မုန်တိုင်းခဏခဏဝင်လေ့ရှိတဲ့ မြို့လေးမှာ ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့နေထိုင်ကြပါတယ် တစ်နေ့မှာ မုန်တိုင်းတစ်ခုကြောင့် ဖခင်ဖြစ်သူကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ် နောက် နှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်အကြာမှာတော့ အစ်ကိုဖြစ်သူဘရိဇ်က မြို့လေးမှာပဲ အဟောင်းပြင်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင် ဖွင့်ထားပြီးညီဖြစ်သူဝေလ်ကတော့ မုန်တိုင်းတွေကို ကြောက်တဲ့ မိုးလေဝသပညာရှင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ကေဆီကော်ဗင်လို့အမည်ရတဲ့ မိန်းကလေးကတော့ငွေအဟောင်းတွေကို ဖျက်ဆီးဖို့ သယ်လာပေးရတဲ့ အရာရှိပါ တစ်နေ့မှာ တန်မီလို့အမည်ပေးထားတဲ့ မုန်တိုင်းက ဒီမြို့လေးကိုထပ်ဖြတ်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ဒီမုန်တိုင်းကို အသုံးချပြီးနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဌာတိုက်ကို ဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေလည်း ရှိနေပြန်ပါတယ် အဲ့ဒီအရှုပ်တွေကြား ဘရိဇ်တစ်ယောက်ပါသွားတဲ့အခါ... ကေဆီနဲ့ ဝေလ်တို့ နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး မုန်တိုင်းကြားက ဘရိဇ်နဲ့ ကျန်တဲ့ ဓါးစာခံတွေကိုကယ်ထုတ်နိုင်မှာလား ဒါမှမဟုတ် လူဆိုးတွေကပဲ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ လွတ်သွားမလား လောဘဇောတက်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေတောင် စိတ်ပြောင်းသွားနိုင်ကြောင်း... အစ်ကိုဖြစ်သူအသက်အန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါ မိမိရဲ့အကြောက်တရားကို ကျော်လွှားဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ညီဖြစ်သူရဲ့ မေတ္တာတရား စတာတွေကို မြင်တွေ့ခံစားရမှာပါ ဒီဇာတ်ကားကို The Mummy3နဲ့ Dragon ...
Trouble Is My Business (2018) မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုသတ်တဲ့အမှုနဲ့ စွပ်စွဲခံထားရတဲ့ အလွတ်စုံထောက် ရိုလန်ဒရ်ိတ်ခ်ဟာ သူ့ရုံးခန်းမှာ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ထိုင်နေတုန်း အနက်ရောင်ဝတ်စုံကို ဆင်မြန်းထားတဲ့ ဆံပင်အနက်ရောင်နဲ့ ကတ်သရင်းဆိုတဲ့ မိန်းမချောတစ်ဦး သူ့ဆီ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်… ဒီမိန်းကလေးဟာ…လူကုန်ထံအသိုင်းအဝိုင်းထဲက မွန်တီမာမိသားစုရဲ့ သမီးတစ်ယောက်ပေါ့… ရောက်လာတဲ့ကိစ္စက သူ့အဖေပျောက်သွားလို့ လိုက်ရှာပေးဖို့အကူအညီလာတောင်းတာပါတဲ့… .ဖြစ်ချင်တော့ စုံထောက်နဲ့  မိန်းမပျိုဟာရည်ငံသွားကြပြီး အဲ့ဒီညမှာတင် စုံထောက်တိုက်ခန်းကိုလိုက်အိပ်ပါသတဲ့…. မနက်နိုးတော့ မိန်းကလေးဟာ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီး သူနဲ့အတူအိပ်ခဲ့တဲ့ အိပ်ရာပေါ်မှာ သွေးကွက်ကြီးတစ်ခုသာ ကျန်ခဲ့တာကို စုံထောက်ကထူးဆန်းစွာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်… အဲ့ဒီမနက်မှာ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုရပြီး ရုံးကိုပြန်အသွား ရွှေအိုရောင်ဆံပင်နဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက် ထပ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်… သူကတော့ ကတ်သရင်းရဲ့ညီမ ဂျနီဖာပါတဲ့… သူကလည်းမနက်လင်းလင်းချင်း သူ့ဆီကို ကတ်သရင်းနဲ့စုံထောက်အတူရှိနေခဲ့ကြတဲ့ပုံတွေကို စာအိတ်တစ်အိတ်နဲ့ရောက်လာပြီး သူ့အဖေပြီး သူ့ညီမပါထပ်ပျောက်သွားတဲ့အတွက် သူ့ဆီလာရောက်စုံစမ်းခြင်းပါ.. ဒီလိုနဲ့ ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးမှုတွေကို ရှာဖွေရင်း ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတွေထဲ ဝင်ရောက်မိသွားတဲ့ ရာဇဝတ်စုံထောက်ကားကို ၁၉၄၀ ပတ်ဝန်းကျင် ကပုံစံမျိုးနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ ၂၀၁၈ ထွက် ဇာတ်ကားတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်… စုံထောက်ကားကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက် ဇာတ်လမ်းအဆုံးထိဆွဲခေါ်သွားပြီး ဇာတ်လမ်းအဆုံးမှာ ဟာခနဲ ဟင်ခနဲ ဖြစ်သွားစေမယ့် ကားတစ်ကားပဲဖြစ်လို့ ကြည့်ရှုခံစားကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ...
IMDB: 6.9/10 1,069 votes
Death Wish (2018) 2018 ခုနှစ်ထွက် အက်ရှင်ဇာတ်ကားသစ် Death Wish ကိုတော့အထူးတလည်မိတ်ဆက်ပေးနေစရာ မလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကို1972 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ Brian Garfield ရဲ့စာအုပ်ကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာကတော့ Eli Roth ဖြစ်ပြီး၊Die Hard Franchise မှာဇာတ်ဆောင်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး အက်ရှင်မင်းသားတစ်ဦးအဖြစ် လူအများသိကြတဲ့ မင်းသားကြီး Bruce Willis က ခေါင်းဆောင်မင်းသားနေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ Box Office မှာ ထင်သလောက် မအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း IMDb rating 6.5 ရှိတာကြောင့် တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ အက်ရှင်ကားတစ်ကားလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ========== ပေါလ်ကာစီဟာ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူ လူစီသမီးဖြစ်သူ ဂျော်ဒန်တို့နဲ့အတူ မိသားစုဘ၀လေးကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနေတဲ့လူအေးကြီးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ သူတို့မိသားစုအပေါ်ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျရောက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ ဓားပြတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ လူစီသေဆုံးပြီး သမီးဖြစ်သူဂျော်ဒန်ဟာမသေရုံတမယ်ဘ၀မျိုးကိုရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။ အဆိုပါမှုခင်းဖြစ်ပြီး ရက်အတော်ကြာတဲ့အထိ ဘာသတင်းမှမထူးတာကြောင့် ရဲတွေကို အားကိုးလို့မရဘူးဆိုတာကို ဒေါက်တာကာစီတစ်ယောက် သဘောပေါက်သွားပြီး သူ့မိသားစုအတွက် တရားမျှတမှုကို သူကိုယ်တိုင်ဆောင်ကြဉ်းဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်........။ မင်းသားကြီး ဘရုစ်ဝီလီရဲ့အက်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက် လက်မလွှတ်တမ်းကြည့်ရှုသင့်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ ကိုမျိုးသန့်ပါ) File ...
The Strangers: Prey at Night (2018) The Staranger: Prey at Night 2018 ကတော့ Thriller၊/Horror ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Rating 6.5 ရထားပြီးတော့ ပရိသတ်ကို အခြား Horror ကားနဲ့ မတူတဲ့ ရသတစ်မျိုးကို ပေးနိုင်မယ့်ကားလေးပါ။ ဇာတ်လမ်းကတော့ မိသားစုတစ်စု သမီးဖြစ်သူကို ကျောင်းအသစ်ပြောင်းပေးဖို့ ခရီးထွက်လာတဲ့ညတစ်ည မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမိသားစုဟာသူတို့ရဲ့ ဦးလေး အန်ကယ်မာဗ့် တို့ပိုင်တဲ့ ဂါလင် ရေကန် အပန်းဖြေစခန်းကို ထိုညမှာ ၀င်ရောက်တည်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ သူတို့အတွက် အခန်းသော့နဲ့ မနက်မှ တွေ့မယ်ဆိုတဲ့ စာကို အန်ကယ်မာ့ဗ်က တကယ် ချန်ထားပေးခဲ့တာလား အရုပ်မျက်နှာနဲ့ တွေ့ရတဲ့ သူတွေရဲ့ မျက်နှာဖုံးအောက်က ရက်စက်မှုတွေကို သူတို့ သိလိုက်ရတဲ့အခါမှာ သူတို့မိသားစု ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား အဲ့ဒီအရုပ်မျက်နှာဖုံးနဲ့ လူတွေကရော ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကို ရင်တမမ နဲ့ ကိုယ့်ကို ဇာတ်လမ်းအဆုံးထိ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်မယ့် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ Brilliant Star ပါ) File ...
Irreplaceable You (2018) ဒီကားလေးက ဒါရိုက်တာ Stephanie Laingရဲ့IMDB rating 6.3 ရထားတဲ့အမေရိကန် အချစ်ဟာသဒရမ်မာကားလေးပါ ဇာတ်လမ်းပုံစံကတော့ ငယ်ငယ်တည်းကအခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဆမ်နဲ့ အက်ဘီတို့က စေ့စပ်ထားကြတဲ့သူတွေပေါ့ ရှစ်နှစ်ကတည်းက ချစ်ခင်လာခဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကံကြမ္မာကသေကွဲမကွဲခင်အထိပဲ အတူနေဖို့ပဲဖြစ်လာခဲ့တယ် ကံကြမ္မာက အက်ဘီ့မှာ သေနိုင်တဲ့ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ဖို့အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါ အက်ဘီကသူ့ရဲ့မသေချာတော့တဲ့ ဘဝကိုရင်ဆိုင်ရင်း ဆမ့်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ အချစ်သစ်ကိုစရှာပေးပါလေရော နောက်ဆုံး အက်ဘီကဆမ့်ကို ဘယ်လိုတွေလုပ်ပေးပြီးနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားလဲ... အက်ဘီ့ရဲ့ဆန္ဒရော ပြည့်သွားခဲ့လားဆိုတာကို ဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်ကြည့်နော် (ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ မေဖြူခင် ပါ) File Size : (750 MB) and (325 MB) Quality : WEB-Rip 720p Running Time : 1hr 36min Format : Mp4 Genre : Comedy, Drama, Romance Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source : 1080p.WEBRip.DD5.1.x264-FGT Translated by May Phyu Khin Encoded by Thanhtike Zaw
WhataMan Wants (2018) Rating 7.4 ရထားတဲ့ အခု ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ WhataMan Wants ဆိုတဲ့အတိုင်း 18+ ဆန်ဆန်ကို ဟာသာဆန်ကြည့်ရမယ့်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားထဲမှာ Running man အချစ်တော် ဆုန်းဂျီဟို နဲ့ Goblin ဇာတ်လမ်းထဲက Samshin lady အဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Lee Ei တို့ ပါဝင်ထားတဲ့အတွက် ကြည့်လို့ကောင်းမယ့်ကားဆိုတာကို အထူးတလည် ပြောစရာလိုမယ်မထင်တော့ပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းကတော့ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ သူတွေအကြောင်းကို အဓိက မီးမောင်းထိုးပြ ထားပြီးတော့ အတွေးပေါင်းများစွာနဲ့ ကိုယ့်ကိုထားခဲ့မယ့် အချစ် Drama ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက် သူတို့လိုချင်တာဘာလဲ မိန်းမ တွေကရော သူတို့ယောက်ျားကို ပါရမီဘယ်လိုဖြည့်ပေးရမလဲ ဆိုတာ သင်ခန်းစာပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကရော သူတို့ဖောက်ပြန်တာ သူတို့မိန်းမကို မချစ်တော့လို့လား လိင်ဆန္ဒ မပြည့်ဝလို့လား ဒါမှမဟုတ် ဖောက်ပြန်တာကို ကြွားစရာတစ်ခု အဖြစ်သတ်မှတ်ထားလို့လား မိသားစုတစ်ခု ရဲ့ နွေးထွေးမှု၊ သံယောဇဉ်တွေကို တတိယလူ ...
Fahrenheit 451 (2018) ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ HBO ရုပ်သံလိုင်းကနေ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Fahrenheit 451 ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်ကာလမှာ အာဏာပိုင်တွေဟာ လူတွေ ပညာဆည်းပူးနေတာတွေ၊ အသိပညာရှာဖွေတာတွေကို ပိတ်ပင်တားဆီးနိုင်ဖို့၊ သတင်းအမှောင်ချနိုင်ဖို့၊ စိတ်ကြိုက်ခြယ်လှယ်နိုင်ဖို့အတွက် စာအုပ်တွေအားလုံးကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့ စေခိုင်းပါတော့တယ်။ စာအုပ်တွေကို မီးရှို့ဖျက်စီးတဲ့သူတွေထဲမှာ Guy Montag ဆိုတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်လဲ ပါဝင်ပြီး အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အမိန့်အတိုင်း ဘာအမေးအမြန်းမှမရှိပဲ ဖျက်စီးပေးနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို မေးခွန်းထုတ်လာတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီးနောက် စာအုပ်တွေကို ဖျက်စီးတဲ့လုပ်ရပ်ကို သူကိုယ်တိုင်ပြန်လည်တားဆီးဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေကတော့ Black Panther ဇာတ်ကားထဲမှ Michael B. Jordan နဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသားကြီးဖြစ်တဲ့ Michael Shannon တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Fahrenheit 451 ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး မင်းသားကောင်း ၂ လက်နဲ့အတူ ဇာတ်လမ်း အစအဆုံးဆွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြည့်သင့်တဲ့ကားကောင်းတစ်ကားလို့ပဲ ညွန်းလိုက်ပါရစေ။ (ဘာသာပြန်သူကတော့ ကိုဟိန်းမင်းထွန်းပါ) File Size : (750 MB) and (350 ...
Rangasthalam (2018) Rangasthalam (2018) မြန်မာစာတန်းထိုး =============================== ဒီတစ်ခါတော့ ဘုိုင်ရာဘာမင်းသားလို့ လူသိများတဲ့ ရမ်ချရန်းရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် ဇာတ်ကားတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် IMDb 9.1/10ထိရရှိထားတာဆိုတော့ ကောင်းမကောင်း သိပ်ပြောနေစရာ မလိုလောက်ပါဘူး သာမန်ကြည့်ဖူးနေကျ Talguကားတွေလို Overတွေမပါဘဲ သဘာဝကျကျ အက်ရှင်အလန်းစားတွေ၊ သီချင်းတွေနဲ့ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် တင်ဆက်ထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ၁၉၈၀ခုနှစ်တွေက ရန်ဂက်(စ်)တလန်ဆိုတဲ့ ကျေးရွာလေးက ဇာတ်လမ်းတပုဒ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွာထဲမှာ လယ်တွေကိုရေသွင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ ချစ်တီးဘာဘူဟာ မွေးရာပါနားလေးတဲ့ ချို့ယွင်းချက်ရှိပြီး မဟုတ်မခံ လူစားမျိုးပါ၊ သူ့အရှေ့မှာ မတရားတာတွေ့ရင် ဝင်ချဖို့ နှစ်ခါမစဉ်းစားတတ်ပါဘူး ရွာထဲမှာ အဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ရွာသားတွေကို ချေးငွေတွေထုတ်ချေးထားပြီး အမြတ်ကြီးစား ခေါင်းပုံဖြတ်နေတဲ့ အဖွဲ့တဖွဲ့လည်းရှိပါတယ် ဒီအဖွဲ့ကို အဓိကချုပ်ကိုင်ထားတာက နှစ်(၃၀)ဆက်တိုက် သူကြီးဖြစ်နေတဲ့ ရွာသူကြီးပါ လူတွေက သူ့ကို ကြောက်ရွံ့ကြသလို၊ ရင်မဆိုင်ရဲကြပါဘူး သူနဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့သူမှန်သမျှ မရှု့မလှသေပွဲဝင်ကြရစမြဲပါ။ ဒီလို ဂုတ်သွေးဆုပ်အမြတ်ထုတ်နေတဲ့ အဖွဲ့ကို ရင်ဆိုင်ပြီး သူကြီးနေရာက ဝင်ပြိုင်မယ်လို့ စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့သူ တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူနာမည်က ကူမာရ် ဘာဘူပါ ကူမာရ်ဟာ ချစ်တီးဘာဘူရဲ့ အစ်ကိုဖြစ်ပြီး၊ ဒူဘိုင်းမှပြန်လာတဲ့ ပညာတတ် တစ်ယောက်လည်း ...
KL Special Force (2018) KL Special Force ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ ၂၀၁၈ခုနှစ်ထွက် မလေးရှားအက်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိတွင် IMDb rating 7.5 ရရှိထားပြီး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသူတွေကတော့ Fattah Amin,Rosyam Nor,Syamsul Yusof စတဲ့သရုပ်ဆောင်မင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ Roslan ဦးဆောင်တဲ့ အထူးအဖွဲ့ဟာ Asyraff ဦးဆောင်တဲ့ မာဖီးယားအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ "Gang Anarkis" ကိုနှိမ်နင်းဖို့တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရပါတယ်။ ဒီအထူးရဲအဖွဲ့မှာ ပါဝင်လာသူနောက်တစ်ယောက်ကတော့ အသက်ငယ်ငယ်ရဲတပ်သားလေး Zul ဖြစ်ပါတယ်။ Zul နဲ့ Roslan တို့နှစ်ယောက်ကြားကို မာဖီးယားခေါင်းဆောင်Asyraff မှ ဘယ်လိုခလောက်ဆန်မလဲ...... ဒီအမှုမှာဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိတာလဲ..... ရဲတပ်ဖွဲ့မှ မာဖီးယားဂိုဏ်ကိုဘယ်လိုနှိမ်နင်းသွားမလဲစတာတွေကို အက်ရှင်စွန့်စားခန်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရမှာပါ။ File Size : (850 MB) and (345 MB) Quality : WEBRip 720p Running Time : 1hr 45min Format : Mp4 Genre : Action Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Source : 720p ...